सरकार, हामी नागरिकलाई कोरोनाको सूचना खोइ ? | Ratopati
personराधा पोखरेल exploreकाठमाडौं access_timeबैशाख २२, २०७८ chat_bubble_outline0
छिमेकी देश चीनको वुहानबाट उत्पत्ति भएको कोरोनाभाइरस फैलिएर संसार आतंकित छ । अहिले हामी राजनीतिकमात्रै होइन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै हिसाबले संक्रमणकालमा छौं । संक्रमणकाल समाजका लागि प्रसवकाल हो । प्रसव वेदना सहन निकै गाह्रो हुन्छ । तर, सहनुको विकल्प पनि हुँदैन ।
संसार कोरोना विरुद्ध युद्ध लड्दैछ । आजको संसारमा कुनै पनि देश निर्जन टापु बनेर बाँच्न सक्दैन । वैश्वीकरण आजको संसारको चरित्र हो । संसारको कुनै ठूलो देशमा संकट आयो भने त्यसको प्रत्यक्ष परोक्ष असर संसारभर पर्छ । रेमिट्यान्समा बाँचेको हाम्रो देशमा खाडी मुलुकहरूले उडान बन्द गर्ने्बिबत्तिकै त्यसको असर आर्थिक क्षेत्रमा देखापर्न थालिसक्यो । भारतले सीमा सिल गर्ने कुरा सँगसँगै ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपभोग्य बस्तुको अभाव बजारमा देखिन थालिसक्यो ।
आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको हाम्रोजस्तो देशमा अहिलेदेखि नै राम्रो तयारी नगर्ने हो भने भोलि हामी कसैले कल्पनै नगरेको संकट आउन सक्छ । कोरोना संक्रमित देशहरूबाट सरकारले बेलैमा सिकेर आवश्यक पूर्वतयारी गर्नु जरुरी छ ।
लकडाउनले रोजगारी खोसिएपछि सहरमा खान नपाएका मजदुरहरू बिरामी जहान परिवार लिएर झन्डै हजार किलोमिटरको लम्बे यात्रा पूरा गरेर भोकभोकै घर पुगेका छन् । तिनलाई सुरक्षित ढंगले घर पु&yen;याउनु त कहाँ हो कहाँ उल्टै ठाउँठाउँमा अवरोध सिर्जना गरेर राज्यले दुःख दिएको देख्न सकिन्छ । भारतबाट ज्यान बचाउन भोकभोकै घर फर्केका हजारौं हजार नागरिकलाई हप्तौंसम्म सीमानामा अलपत्र पारेर सरकारले आफ्नै देशका नागरिकहरूलाई दुश्मनको जस्तो व्यवहार गरेको थियो।
निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँच्न विवश मान्छेहरूलाई रात र दिन छुट्याउन गाह्रो भइरहेको छ । अन्नको मुख देख्न नपाएको धेरै दिन भइसक्यो । अझ कति दिन देख्न नपाइने हो, ठेगान छैन । हाम्रोजस्तो देश लकडाउन नगर्दा रोगले मर्ने, गर्दा भोकले मर्ने जटिल अवस्थामा छ । ‘भोकले मर्नुभन्दा कोरोनासँग जुधौंला’ भन्ने निष्कर्षमा आम सर्वसाधारण पुगेको कुरा पनि यस अगाडिको लकडाउनबाट भोगिएको सत्य हो ।
सकेसम्म सरकारले विपदमा परेका आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यवस्था गर्न नसके पनि सुरक्षित रहने विकल्प भने दिनैपर्छ । सरकार भनेकै विपत्तिमा चाहिने त हो । अरुबेला जसोतसो बाँचेकै त हुन्छन् मान्छे । तर, विडम्बना ! सरकार कहाँ छ भनेर दिउँसै बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने भएको छ ।
कोरोना महामारीले मान्छेको ज्यान गइरहेको छ । संक्रमणको जोखिम घटेको छैन । उद्योग, कलकारखाना, बन्द व्यापार ठप्प छ । रोजगारी गुमिरहेको छ । देश भयावह आर्थिक संकट सम्मुखमा उभिएको छ । तर, हाम्रा शासकहरू साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर आफ्नो कुर्सी जोगाउन लागिपरेका छन् । आफ्नो नालायकिपनलाई छोप्न र कुर्सीको आयु लम्ब्याउन हप्ता–हप्तामा नयाँ नयाँ फण्डा गर्छन् । कुर्सीका लागि शासकरूले झूट, कीर्ते जे–जे गर्नु थियो; सबै गरिसके । गर्न बाँकी केही छैन अब ।
अनि हामी ( व्यापारी) पनि कति संवेदनाहीन ? नाफा खान पाइएन भनेर सामान लुकाउँछौं । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छौं ।
बोरामा पैसा बोकेर जाँदा झोला भरी सामान नआउने भइसक्यो ।व्यापारी साथीहरू ! संकटका बेला साथ दिने हो । सहयोगको हात बढाउने हो । मास्कमा समेत नाफा खाने होइन । मृत्यु शाश्वत सत्य हो । आखिर अजम्बरी कोही छैन । कम्तिमा पाप र धर्मको त ख्याल राखौं । अनि हामी नागरिकहरु रोगले आफ्नो र पराई छुट्ट्याउँदैन । कोरोनाले छानीछानी मात्रै हमला गर्दैन । यस्तै लापरवाही र गैरजिम्मेवार बन्दै जाने हो भने तपाईं–हामीलाई हमला गर्न आइपुग्नेछ कोरोना ।
कोरोनाविरुद्ध जुध्न आजसम्म सरकारले के–के तयारी गरेको छ ? अँग्रपन्तिमा रहेर काम गर्नेहरुको लागि सरकारले स्वास्थप्रति कस्तो ब्यवस्था गर्दैछ ? हामी नागरिकलाई औपचारिक सूचना खोई ? नागरिकहरू एउटा मिडियाको समाचार पढेर सुरक्षित महसुस गर्छन् अर्को मिडियाको समाचार पढेर पुरै आतंकित हुन्छन् । आजको युग सूचना सञ्चारको युग हो । सूचनाको मनोबैज्ञानिक प्रभाव कतिपर्छ यहाँ व्याख्या गरिरहनुपर्दैन । गलत सूचनाका कारण आत्तिएर कतिपय भाइरस संक्रमित व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमान चिकित्सकहरूले गरिरहेका छन् । त्यसैले हामी निद्राबाट ब्युँझने हो कि ?
संसारमा मान्छेका लागि स्वास्थ्यभन्दा ठूलो कुरा अरू केही हुन सक्दैन । सरकार भनेको नागरिकको अभिभावक हो । उसले अभिभावकत्व दिनसक्नुपर्छ । चुनावमा फोस्रो आश्वासन बाँडेर मात्रै हुँदैन । अहिले हामी आपतकालीन अवस्थामा छौँ । हामी यो र त्यो गर्न सक्दैनौं भनेर हात उठाउने होइन, मन्त्रालयमा हुने भ्रष्टाचार नगर्ने संकल्प गर्ने हो भने पनि हजारौं व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिन्छ । सरकार ! यस अवस्थाको दौडमा जबसम्म भाइरसभन्दा हामी एक कदम अगाडि बढ्दैनौं, तबसम्म यो लडाइँ जित्न सक्दैनौँ ।